Ukama - Bezzia | Bezzia
Nehukama tinotaura nezvehukama hwatinoita nevanhu vatinoda uye tinoda kuve chikamu chehupenyu hwedu. Ndokusaka chikamu ichi cheBezzia chakatsaurwa kune iyo Vaviri hukama: makiyi, matambudziko kana matipi ekunakidzwa nehukama hwakanaka.
Iyi ipfungwa yakakosha kwazvo muhupenyu hwevakadzi, nekuti pamusoro pekuve chikamu chechikamu chinogona kugara kwehupenyu hwese, iri danho rekutanga kune chimwe chinhu chakakura: kuva nevana. Naizvozvo, isu tichasimbisa makiyi e kugarisana zvakanaka, izvo zvinozoenda kuburikidza nekugara zvakanaka iwe pachako, kuziva mumwe wedu, kuvanzwisisa uye kutarisira hukama.
Naizvozvo, muchikamu chino isu tinonyanya kupa kuraira uye kuyedza kukuita iwe unzwisise kukosha kwekutaurirana kana kupuruzira muhukama hwedu.
kubudikidza Maria Jose Roldan inoita 1 zuva .
kubudikidza Maria Jose Roldan inoita 2 mazuva .
Kuvhunduka kunovhundutsa pamoyo muvaviri
Kushungurudzika hakusi kudya kwekuravira kwakanaka kune chero munhu uye kutya kunotyisa kuti munhu ...
Kurwira masimba kwakajairika here mune vaviri?
Chinhu chimwe chete icho chaunoona paterevhizheni uye mu cinema uye chimwe chakasiyana zvachose ndizvo ...
Kuva nemumwe wako ane tariro kwakanakira hutano hwako
Hazvina kufanana kugovana hupenyu nemunhu anoona zvinhu kubva kudivi rakanaka, pane ...